Sida loola dhaqmo haweenay xiriir saaxiibtinimo: tilmaamo iyo tabaha | Ragga Stylish
Sida loola dhaqmo dumarka asturnaanta
Labada xiriir iyo jinsi labadaba, waa inaad ogaataa sida loola dhaqmo dumarka asturnaanta. Haddii aan dooneyno in cilaaqaadyadu noqdaan kuwo waxtar leh, labada qofba waa inay si isku mid ah ugu raaxaystaan. Raaxo oo dhan yaanay qaadan ninka ama naagtu. Waan ognahay inay adagtahay inaad ka farxiso naag sariirta saaran, laakiin hadaad taqaanid tilmaamaha oo dhan, waad la kulmi kartaa baahiyaha galmada.
Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa sida loola dhaqmo dumarka asturnaanta iyo maxay yihiin dhinacyada muhiimka ah.
1 Sida loola dhaqmo dumarka asturnaanta
1.1 Ma aha caruusad la buufin karo
1.2 Maya macnaheedu waa maya
1.3 Sida loola dhaqmo haweeney xiriir dhow: wada xiriir iyo orgasms
1.4 Ciyaaraha hordhaca ah
Waa inaan ogaanno markaan la joogno lammaanahayga ama galmo la galno qof aan naqaanno, waa inaan iska dhigno meesha kan kale. Taasi waa, labada qofba inay si isku mid ah ugu raaxaystaan ​​galmada si ay faa'iido u hesho. Ma noqon karno daneyste oo ma raadin karno qanacsanaantayada. In la barto sida loola dhaqmo haweeney ka ag dhawaanshaha tan waa aasaas. Dumarku waxay u muuqdaan inay haystaan ​​waqti aad u fudud oo ragga ka dhigaya inay gaaraan kacsiga. Ragga waxaa loo qoondeeyay biyo bax aad u sii horreeya sababo badbaado awgood. Si kastaba ha noqotee, haweeneydu waxay leedahay xubin keli ah oo loogu talagalay raaxeysiga iyo inaad u baahan tahay inaad ogaato sida wanaagsan ee loo kiciyo.
Haddii aad rabto inaad ogaato sida loola dhaqmo dumarka asturnaanta, waa inaad raacdaa talooyinkaan:
Ma aha caruusad la buufin karo
Maskaxda ku hay in rag badani khalad ka galaan galmo la sameynta gabar iyagoon muujineyn wax xamaasad ah Waxay ka dhigeysaa dumar badan inay dareemaan inay yihiin dalool uun sida ciyaarta galmada. In kastoo kulligood aysan sidaa ahayn, haddana way ku habboon tahay inaad yeelato qiiro gaar ah. Waa inaadan ku qasbin sidoo kale. Xaqiiqda ah in ninku uu cadayanayo wax sugaya ugu dambayn inuu gabi ahaanba gooyn karo.
Jinsi waa inuusan waligiis ku dhammaanin galmada ragga. Haddii aysan midkood helin hubi inay halkaa timaaddo ka dibna adigu waad dhammaysaa. Nin iyo naag labaduba waa inay dareensiiyaan lammaanahooda inay dareemayaan iyada markasta. Jinsigu ma aha inuu ahaado fal danaysi tan iyo waa arrin laba ah.
Maya macnaheedu waa maya
Labada mawduuc ee cinjirka galmada iyo galmada dabada, maya maya. Haddii haweeneydu aysan rabin galmada dabada, waa inaad u qaadataa oo aadan ku adkeysan. Waxaa la mid ah kondhomka. Waa inaad labadaba uga tagtaa si aad u gashato cinjirka galmada si aad uga fogaato cudurada galmada lagu kala qaado. Haddii ay kuu sheegto in aysan dooneyn in ay kula galmooto, ha ku adkeysan. Kaliya kamarad ahaan, laakiin iyadu ma ahan addoon galmo iyo qasab kuma aha inuu sameeyo wax walba oo aad dhahdo haddii uusan dareensaneyn. Xitaa maanta haween badan ayaa dhex galay doodaha ku saabsan xaaladaha ninku ku qasbo haweeneyda inay galmo sameyso.
Galmadu waa arrin laba ah. Haddii aragtidaadu aysan ku habboonayn tan lammaanahaaga, waa inaad sugto inay labadooduba oggolaadaan. Sidoo kale waxay noqon kartaa ninka aan dareensaneyn galmada oo haweeneydu waa inay si isku mid ah u ixtiraamtaa.
Sida loola dhaqmo haweeney xiriir dhow: wada xiriir iyo orgasms
Waxaa lagugula talinayaa in galmada aysan ku ekeyn oo keliya galmada ragga. Haddii haweeneydu aysan midkoodna helin, oo aad daallan tahay markaad timaaddo ka dib, hubi inay horay u timaaddo. Jacaylka wanaagsani had iyo jeer wuxuu sugaa iyada ugu dambayn ama wuxuu isku dayaa inuu waqtiga ku habboonado. Waxay ka dhexeeyaan cilaaqaadyo tiro badan oo uu ninku ku gaadho kacsiga isagoon sugin lammaanihiisa ama aan ka walwalin iyada. Haddii tani dhacdo, waxaa fiican inaad ku sii wadato baaritaanka gacantaada si aad u wanaajiso waqtiga ay awood u leedahay galmo ahaan.
Wadahadalku waa lama huraan in la helo galmo wanaagsan. Waxa jira dad aan rabin inay sariirta ku wada hadlaan, in kasta oo aanu xeer u ahayn qof walba. Marna xanuun ma leh in qofka kale loo sheego sida aad tahay. Aynu qiyaasno in haweeneydu ay ku faraxsan tahay ninka. Aad bay ugu mahadsan tahay inaad muujiso haddii ay jeceshahay, haddii aad rabto inaad si dhakhso ah ama gaabis ah, cadaadis weyn, raacis gacmo, iwm Isla sidaas oo kale ayaa dhacda haddii aad rabto inaad mowqif gaar ah yeelato, waxaa fiican inaad sidaa dhahdo oo aad xiriir yeelato mar walba.
Ciyaaraha hordhaca ah
Si aad si fiican u baratid sida loola dhaqmo haweeney xiriir saaxiibtinimo, waa inaad tixgelisaa ciyaarta hore. Dumarku waxay leeyihiin aagag badan oo ka mid ah waxyaabaha kacsan marka loo eego ragga. Inta badan ee aad kiciso naagta ka hor intaanad galin, waxa ugu wanaagsan galmada ayaa soo bixi doonta. Waqtiga dheer ama kicinta kahor galmada, ayaa sifiican uquruxsan adigana. Xitaa haddii ay u muuqato mid aan xiriir la lahayn, imtixaanka qaado. Taabo ibta, qoorta, miskaha iyo siilka. Ogaanshaha sida loo maareeyo kintirka ayaa lagama maarmaan u ah in haweeneyda la kiciyo ugu badnaan. Mar alla markii aad kiciyey haweeneyda sida ugu macquulsan, bilow inaad isticmaasho guska oo aad bilowdo inaad dhex gasho.
Talo bixin guud ma aha inay ka bilowdo xagga hoose. Waa inaadan farta ku taaban ama aadan taaban siil aan saliidayn. Qaado saamaynta ka soo horjeedda. Habka ugu wax ku oolka badan ee loo kiciyo lamaanahaaga waa taabashada dhamaan qeybaha marka laga reebo xubinta taranka. Haddii aad taqaanid sida loo taabto inta ka hartay aagaggiisa nafsaddiisa, si ay himilooyinkiisu u kordhaan oo aan uga helay dhiirrigelinta inbadan.
Tilmaam kale oo la siiyo si loo barto sida loola dhaqmo haweeneyda xiriir dhow ayaa ah iska siib sharaabaadaha. In kasta oo tani ay xoogaa muran badan tahay, haddana waxaa jira dumar aan rabin sharabaada inta lagu guda jiro galmada sida kuwa kale aysan u danayn. Mararka jiilaalka qaarkood waa lagula talin karaa, in kasta oo waxa ugu caansan ay tahay inaad iska bixiso sharaabaadyada.
Talada ugu fiican ee aad siin kartid si aad u baratid sida loola dhaqmo haweeneyda adiga kugu dhow waa inay wax soosaaraan. Marwalba qasab kuguma aha inaad sidaas oo kale sameyso. Jinsigu waa inuusan noqon mid caajis ah ama mid caadi ah. Xitaa haddii aad hesho jago ay ku gaari karto orgaan, ha ku xadgudbin jagadaas. Marwalba maahan inay kaa farxiso.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad ku baran karto wax badan oo ku saabsan sida loola dhaqmo dumarka asturnaanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Sida loola dhaqmo dumarka asturnaanta
Martin Lamb dijo
Waxaan xiiseynayaa macluumaadka aad ii soo diri karto si aad ii caawiso, waxay ila tahay aniga inaad haysato dukumiinti aan u baahanahay.
Ku jawaab Martin Cordero
Calaamadaha qurxinta ragga
Barnaamijyo lagu iibsado dharka